AMISOM oo qorsheyneysa iney xoreyso dhulka Al-Shabaab heystaan ka hor 2021-ka - Halbeeg News
MUQDISHO(HALBEEG)-Ciidamada AMISOM ayaa qorsheynaya howlgallo hor leh oo lagu xoreynayo deegaanada ay heystaan ururka al-Shabaab, iyadoo la meel mariyay qorshihii arrintaasi lagu fulin lahaa ka hor inta aaney AMISOM ka bixin Soomaaliya 2021-ka.
Dukumiintigan ayaa la doonayaa in ay ansixiyaan madaxda sare ee ururka Midowga Afrika iyo sidoo kale taliyeyaasha ciidanka ee waddamada ay ciidamadu ka joogaan Soomaaliya ee kala ah; Kenya, Burundi, Uganda, Itoobiya iyo Jabuuti.
Qorshahan ayaa ogolaanaya in howlgallo wadajir ah ay wada qaadaan ciidamada Soomaaliya iyo AMISOM si loo xoreeyo deegaanada ku haray gacanta ururka al-Shabaab.
Qorshaha ayaa la filayaa in uu bartamaha sanadka soo socda ka bilowdo gobolka Jubbada Dhexe ee maamulka Jubbaland.
Qeybo badan oo gobolka Jubada dhexe ka tirsan ayaa waxaa gacanta ku haya ururka al-Shabaab.
Qorshahan ayaa ku soo aaday kadib markii dalka Burundi loo soo jeediyay inuu yareeyo tirada ciidamada ka jooga Soomaaliya, kaasoo ah codsi ka yimid Midowga Afrika. Ciidamada Burundi ee Soomaaliya ku sugan ayaa gaaraya, 5,432 askari.
Sanadkii lasoo dhaafay dowladda Burundi ayaa sheegtay in ciidamadeeda kala baxeyso Soomaaliya maadaama aan mushaarkooda la bixin muddo 12 bilood ah.
AMISOM waxaa Soomaaliya ka jooga ciidamo gaaraya 22,000 oo askari kuwaa oo loo keenay in ay dowladda ilaaliyaan lana dagaalamaan ururka Al-shabaab.
Tiyaatarka oo dib u dhis lagu bilaabay kadib qaraxyadii mataanaha ahaa